कसरी आफ्नो कपाल सफा गर्ने! - सुझावहरू र महान विचारहरू!
कसरी टर्की बेकन गरेको छ कसरी भन्न
चेडर चीज सूप म्याक र चीज
ग्राउण्ड गोमांस र क्रीम चीजको साथ रोटल रेसिपीहरू
कसरी आफ्नो कपाल सफा गर्ने!
कसरी तपाईको कपाल सफा गर्ने
यो मन पर्यो? यसलाई सुरक्षित गर्न पिन गर्नुहोस्!
पछ्याउन Penterest मा Pennies संग खर्च अधिक महान सल्लाहहरू, विचार र व्यंजनहरु को लागी!
तल टिप्पणीहरूमा आफ्नै आफ्नै महान सल्लाह छोड्नुहोस्!
के तपाईंले हालसालै आफ्नो हेयरब्रस हेर्नुभएको छ? वास्तवमै यसलाई हेर्नुहोस्। यो कूल प्रकारको हो, होइन र? तपाइँको सबै कपालहरु सबै एक ब्रिसलमा समातिए, र, ई, त्यसमा खैरो सामान के हो? केश उत्पादन, छाला कोषहरू, र कपाल तपाईको ब्रशमा कीटाणुहरूको समूहको साथ निर्माण गर्दछ। तपाईंको ब्रश सफा र यी सजिलो सुझावहरूको साथ तयार हुनुहोस्!
पहिलो , कपाल बाहिर निकाल्नुहोस्! यो एकदम सरल छ एउटा कलम वा पेन्सिल, कैंचीको एक अंश, र तपाईंको ब्रश। कलम टिप-प्रथम कपालको मुनि स्लाइड गर्नुहोस्, र माथि तान्नुहोस्। एकचोटि कपाल तपाईंको ब्रिस्टलबाट टाढा टाढा भयो भने, तपाईंले यसको सबै भन्दा काट्न सक्षम हुनुपर्छ। यदि तपाईंसँग कंघी छ भने, तपाईं यसलाई लिन सक्नुहुन्छ र यसलाई ब्रशको साथ चलाएर अतिरिक्त कपालहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
दोस्रो , शैम्पू! तपाईको ब्रशलाई शैम्पू वा भिनेगरको साथ सफा गर्नुहोस्! या त तपाईंको कंघी वा ब्रश सिरकामा भिजाउनुहोस् वा तिनीहरूलाई शैम्पूको साथ स्क्रब गर्नुहोस्। कि त तपाईंको ब्रश सफा पार्नेछ तिनीहरूलाई बिना कुनै क्षति पुर्याउँदछ, वा तपाईंको ब्रशमा कडा रसायनहरू जोडेर, र तपाईंको कपाल! तपाईं कम्बो वा ब्रशमा टुथब्रश प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अलि गहिरो स्क्रब गर्न।
तेस्रो , टाढा कुल्ला! न्यानो तातो संग कुल्ला र तपाइँको ब्रश एक निष्कपट र राम्रो, सफा सफा ब्रशिंगको लागि तयार हुनेछ! यस प्रक्रिया हप्तामा एक पटक दोहोर्याउनुहोस् महिनमा एक पटक त्यहाँ सुनिश्चित गर्नुहोस् कि त्यहाँ कुनै आईकी निर्माण छैन। एक सफा ब्रश सफा कपालको परिणाम हुनेछ!